Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 01:44
4 148 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 01:07 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 01:44 (hanova) (esory)
Ny [[Adaoro]] no vintana sy volana faharoa. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اثور / ''Ath-Thur'' na ''Ath-Thaur'' ("ombilahy") ny hoe ''Adaoro''. [[Zanabintana]] ny AlohotsyAdaoro. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. Lazaina fa mifandratra amin'ny Alakarabo sady mihataka sy miarina eo amin'ny Adimizana ny Adaoro. Ankoatr'izany dia trotroin'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Adaoro. Mitondra tonon'andro roa ny Adaoro, dia ny vava Adaoro (na vavan'Adaoro) sy ny vody Adaoro (na vodin'Adaoro) . Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro.
Vintana sy volana fahefatra ny [[Asorotany]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe <big><small>ا</small></big><small>سرطان</small> / ''As-Saratan'' na ''As-Sartan'' ("foza") ny hoe ''Asorotany.'' [[Renivintana]] ny Asorotany. Ny zoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena azy. Mibaby ny [[Adizaoza]] sy mitrotro ny [[Alahasaty]] ny Asorotany. Mifandratra amin'ny [[Adijady]] nefa mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alakaosy]] sy [[Adalo]] izy. Mitondra tonon'andro telo ny Asorotany, dia vava Asorotany (na vavan'Asorotany) sy ny vonto Asorotany (na vonton'Asorotany) ary ny vody Asorotany (na vodin'Asorotany).
Ny [[Alahasaty]] no vintana sy volana malagasy fahadimy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اأسد / ''Al-Asad'' ("liona") ny hoe ''Alahasaty.'' Zanabintana ny Alahasaty. Ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty. Trotroin'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Alahasaty. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Alahasaty (na vavan'Alahasaty) sy ny vody Alahasaty (vodin'Alahasaty).
Vintana sy volana fahenina ny [[Asombola]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe السنبلة / ''As-Sumbul'' ("virjina") ny hoe ''Asombola.'' [[Zanabintana]] ny Asombola. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alohotsy]] sy miarina eo amin' ny [[Alahamady]] ny vintana Asombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombola (na vavan'Asombola) sy ny vody Asombola (na vodin'Asombola) .
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Mitrotro ny [[Alakarabo]] sy mibaby ny [[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia vava Adimizana (vavan'Adimizana) sy ny vonto Adimizana (na vonton'Adimizana) ary ny vody Adimizana (na vodin'Adimizana).
Ny [[Alakarabo]] no vintana sy volana fahavalo. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اعقرب / ''Al-Akrab'' ("maingoka") ny hoe ''Alakarabo.'' Zanabintana ny Alakarabo. Ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Miarina eo amin'ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adaoro ny vintana Alakarabo. Ny renivintana Adimizana no mitrotro azy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakarabo, dia ny vava Alakarabo (na vavan'Alakarabo) sy ny vody Alakarabo (na vodin'Alakarabo).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974858"